बाइबलका कथाहरू: हामी कसरी सधैंभरि बाँच्न सक्छौं? - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
यो फुच्ची केटी अनि उसका साथीहरू के पढ्दैछन्, ल भन त! हो, उनीहरू तिमीले अहिले पढिरहेकै बाइबलका कथाहरू भएको मेरो पुस्तक पढ्दैछन्। अनि तिमी अहिले “हामी कसरी सधैंभरि बाँच्न सक्छौं?” भन्ने जुन कथा पढिरहेका छौ, उनीहरू पनि त्यही कथा पढ्दैछन्।
उनीहरू के सिक्दैछन्, तिमीलाई थाह छ? उनीहरू सधैंभरि बाँच्न हामीले सबैभन्दा पहिले यहोवा अनि उहाँको छोरा येशूको विषयमा सिक्नुपर्छ भनेर सिक्दैछन्। बाइबलले ‘सधैंभरि बाँच्न हामीले एक मात्र साँचो परमेश्वर र उहाँले पृथ्वीमा पठाउनुभएको उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टको विषयमा सिक्नुपर्छ’ भनेको छ।
उसो भए हामी यहोवा परमेश्वर र उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टको विषयमा कसरी सिक्न सक्छौं? एउटा तरिका, बाइबलका कथाहरू भएको मेरो पुस्तक भन्ने यो किताबको सबै कथा पढेर हो। हामीले यो किताबमा यहोवा र येशूको विषयमा कत्ति धेरै कुरा सिक्यौं नि हगि? त्यसबाहेक उहाँहरूले पहिले-पहिले के काम गर्नुभयो अनि पछि के गर्नुहुनेछ, त्यस विषयमा पनि धेरै कुरा सिक्यौं। तर हामीले यो किताब पढेर मात्र पुग्दैन।
त्यहाँ भुइँमा राखेको अर्को किताब हेर त। त्यो किताब बाइबल हो। सबै कथाको अन्तमा लेखिएका बाइबल पदहरू सुनाइदिनुस् भनेर तिमी पनि कसैलाई भन है। हामी कसरी राम्ररी यहोवाको सेवा गरेर सधैंभरि यो पृथ्वीमा बाँच्न सक्छौं, बाइबलले त्यसबारे सबै कुरा बताउँछ। त्यसैले त हामीले बाइबल पढिरहने बानी बसाल्नुपर्छ।
तर यहोवा र येशू ख्रीष्टको विषयमा सिकेर मात्र पुग्दैन। उहाँहरूको विषयमा धेरै सिके पनि सधैंभरि यो पृथ्वीमा बाँच्ने मौका नपाउन सक्छौं। उसो भए हामीले अरू के पनि गर्नुपर्छ?
सिकेको कुराअनुसार काम पनि गरेर देखाउनुपर्छ। के तिमीलाई यहूदा इस्करयोती भन्ने मान्छे याद छ? येशूले आफ्ना १२ जना प्रेरित छान्नुहुँदा उसलाई पनि छान्नुभएको थियो। यहूदालाई यहोवा र येशूको विषयमा धेरै कुरा थाह थियो। तर उसले के गऱ्यो? केही समयपछि ऊ लोभी भयो र चाँदीका ३० टुक्राका लागि उसले येशूलाई शत्रुहरूको हातमा बेचिदियो। हो, यहूदाले अनन्त जीवन पाउँदैन।
हामीले ६९ नम्बरको कथामा गेहजी भन्ने मान्छेको विषयमा पनि पढेको थियौं नि। उसले अरू मान्छेको कपडा र पैसाको लोभ गऱ्यो। ती कुराहरू पाउन उसले झूटसमेत बोल्यो। तर यहोवाले उसलाई सजाय दिनुभयो। हामीले पनि यहोवाको आज्ञा मानेनौं भने उहाँले सजाय दिनुहुनेछ।
तर सधैं विश्वासी भएर यहोवाको सेवा गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। हामी उनीहरू जस्तै हुनपर्छ। हामी सानो शमूएलजस्तै ज्ञानी हुनुपर्छ। यहोवाको सेवा गर्न थाल्दा ऊ चार-पाँच वर्षको मात्र थियो भनेर हामीले ५५ नम्बरको कथामा पढ्यौं। यसकारण तिमी अहिले असाध्यै सानो भए पनि यहोवाको सेवा गर्न सक्छौ
हामी सबैभन्दा धेरै येशू ख्रीष्टजस्तै हुन खोज्नुपर्छ। आफू ठिटो छँदै उहाँले आफ्नो बुबा यहोवाको विषयमा मिन्दरमा कुरा गर्नुभएको थियो भनेर हामीले ८७ नम्बरको कथामा पढेका थियौं। हामी उहाँजस्तै हुनपर्छ। येशूले जस्तै हामीले पनि सकेसम्म धेरै मान्छेसित हाम्रो असल परमेश्वर यहोवा अनि उहाँको छोरा येशू ख्रीष्टबारे कुरा गर्नुपर्छ। यी कुराहरू गऱ्यौं भने परमेश्वरले पृथ्वीलाई फेरि प्रमोदवन बनाउनुहुँदा त्यहाँ सधैंभरि बाँचिरहनेछौं।
यूहन्ना १७:३; भजन १४५:१-२१
सधैंभरि बाँच्न हामीले कसको विषयमा सिक्नुपर्छ?
चित्रमा त्यो सानी केटी र उसका साथीहरूले गरेझैं के गऱ्यौं भने हामीले पनि यहोवा परमेश्वर र येशूबारे सिक्न सक्छौं?
चित्रमा तिमीले अर्को कुन किताब पनि देख्यौं र हामीले त्यो किताब किन बारम्बार पढ्नुपर्छ?
अनन्त जीवन पाउन हामीले यहोवा र येशूलाई चिन्नुका साथै अरू के पनि गर्नुपर्छ?
कथा ६९ बाट हामी कस्तो पाठ सिक्न सक्छौं?
कथा ५५ को सानो केटो शमूएलको राम्रो उदाहरणबाट के सिक्न सक्छौं?
हामी कसरी येशूजस्तै हुनसक्छौं र यदि हामी उहाँजस्तै भयौं भने के गर्न पाउनेछौं?
यूहन्ना १७:३ पढ्नुहोस्।
यहोवा परमेश्वर र येशू ख्रीष्टको ज्ञान लिनु भनेको दिमागी ज्ञान लिनु मात्र होइन भनेर बाइबलले कसरी देखाउँछ? (मत्ती ७:२१; याकू. २:१८-२०; १ यूह. २:१७)
भजन १४५:१-२१ पढ्नुहोस्।
हामीले यहोवाको प्रशंसा गर्नुपर्ने थुप्रै कारणहरूमध्ये केही के हुन्? (भज. १४५:८-११; प्रका. ४:११)
यहोवा कसरी “सबैमाथि भलो हुनुहुन्छ” र उहाँको यो गुणले गर्दा हामी कसरी उहाँसित अझै घनिष्ठ हुनुपर्छ? (भज. १४५:९; मत्ती ५:४३-४५)
यदि हामी यहोवालाई माया गर्छौं भने के गर्न उत्प्रेरित हुनेछौं? (भज. ११९:१७१, १७२, १७५; १४५:११, १२, २१)
बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? (अध्ययन निर्देशिका)
परमेश्वरले कुन उद्देश्यले पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो? (भाग १)
के परमेश्वर पृथ्वीको अवस्था अहिलेको जस्तै होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो?